> Resource> Video> Olee otú iji tọghata PPT ka WMV
Ya mere, ị na-na na kere a collage nke na-echeta na PowerPoint na foto na mara mma n'okirikiri ma na-achọ iji tọghata ya niile na-WMV videos, na-egwu video mgbe nile na PC gị na ma ọ bụ Blackberry? Enweghị nsogbu, na-eme PowerPoint na foto na music dị mfe, mgbe converting PPT ka WMV video yiri bụghị otú mfe. Dozie nsogbu, ebe a bụ nkọwa maka converting PowerPoint ka WMV.
Ngwá ọrụ, ọ dịkarịa ala otu, bụ mkpa. Mgbe ọ bụla ị chọọ ngwá ọrụ na Internet, i nwere ike ịhụ scads nke a na-akpọ PPT converters ma ọ bụ WMV video eso. Ma, m na naanị ahọrọ Wondershare PPT2Video Pro. Ọ bụ n'ezie mma na converting PPT ka fọrọ nke nta niile ewu video formats, gụnyere WMV. Na mmepụta àgwà zuru okè. Lee ndị nzọụkwụ iji Wondershare PPT2Video Pro iji tọghata PowerPoint ka WMV
Pịa "Free Download" njikọ na-free ikpe mbipute nke PPT2Video Pro. Mgbe ahụ abụọ-pịa .exe faịlụ iji wụnye ya. Mgbe ahụ, pịa "Mepụta Video faịlụ site PowerPoint" ịbanye interface nke ngwa
2 Import PPT ka PowerPoint ka WMV Ntụgharị
Pịa Tinye na-agagharị ma tinye PowerPoint na ngwa, wee pịa Ọzọ.
Onye Ntọala interface, họrọ WMV dị ka mmepụta video format si Format ndọpụta ndepụta na pịa Ọzọ.
Ị nwere ike hụrụ na e nwere ụfọdụ nhọrọ maka ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị na-aga na-egwu video na ngwaọrụ, mgbe ahụ họrọ ngwaọrụ dị ka mmepụta format, n'ihi na ndabara ntọala na-kachasị tupu oge eruo. Na ikpe, ị na-adịkwaghị mkpa ka nchegbu banyere àgwà nke iche video.
4 tọghata PPT ka WMV
Mgbe ihe niile dị njikere, see Malite bọtịnụ iji malite converting PPT ka WMV. Akakabarede ga-okokụre dị ka a ikuku. Mgbe akakabarede, ị nwere ike idezi lekwasịrị video faịlụ na Windows Movie Mee, ma ọ bụ ịkọrọ ya enyi ma ọ bụ ọbụna na-ekiri ya na gị na TV.
The Best Way ka Download YouTube Video on PC ma ọ bụ na Android Devices